Shuruudaha Adeegsiga - Quotes Pedia
1. HESHIISKA KOOBAN. Shuruudahan Isticmaalka waxay u dhaqmayaan sidii heshiis wax ku ool ah (“Heshiis) dhexmara adiga iyo Quotespedia (“ annaga ”,“ annaga ”,“ annaga ”). Markii aad gashid websaydhkan (“Bogga”), waxaad qiraysaa ogeysiis wax ku ool ah oo ah Shuruudahan Isticmaalka iyo heshiiskaaga inuu ku koobnaado luuqadda halkan ku taal.
2. SIYAASADDA MADAXWEYNAHA. Waxaan aaminsanahay inay ahaato daah furnaan markay tahay qaddarinteena asturnaanta iyo xog ururinta, sidaa darteed waxaan daabacnay a Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah dib u dhiskaaga.
3. ISTICMAALKA SHAQADA. Waxaad na siisay rukhsad si aan u isticmaalno qalabka aad ugu dhajiso goobta. Adigoo soo dhejinaya, soo dejinaya, soo bandhigaya, fulinaya, gudbinaya, ama haddii kale u qaybinaya macluumaad ama waxyaabo kale (“Mawduucyada Adeegga”), waxaad na siineysaa, xubnayaashayada, saraakiisha, agaasimayaasha, shaqaalaha, la taliyayaasha, wakiillada, iyo wakiillada shatiga si loo isticmaalo Mawduucyada Isticmaalaha ee la xiriira hawlgallada ganacsigeenna, oo ay ku jiraan iyadoon la xadidin, xuquuqda loo leeyahay in la nuqulo, la qaybiyo, loo gudbiyo, si guud loo muujiyo, loo sameeyo waxqabadka, dib loo daabaco, dib loo habeeyo, loona habeeyo dib u habeynta Mawduuca Adeegga. Laguuma abaalmarin doono wax Kasta oo Isticmaalaha ah. Waad ogolaatay inaan daabacno ama haddii kale shaaca ka qaadno magacaaga taasoo la xiriirta waxa ku jira Adeeggaaga. Markaad dhejisanaysid Boggan Adeegga Bogga, waxaad dammaanad qaadeysaa oo matashaa inaad adigu leedahay xuquuqda Xuquuqda Qofka loo leeyahay ama haddii kale laguu oggolaado inaad dhejiso, qaybiso, soo bandhigto, fuliso, ama si kale u qaybiso.
4. SHAQO LA'AANTA XEERARKA AQOONSIGA EE XAQ U LEH. Markaad geyneyso ama isticmaaleyso Bogga, waxaad ogolaatay inaad ixtiraamto xuquuqda aqooneed ee dadka kale. Isticmaalkaaga Bogga waxaa markasta xukuma oo hoos yimaada sharciyada la xiriira xuquuqda daabacaada, calaamadaha ganacsiga, iyo sharciyada kale ee hantida aqooneed. Waxa aad ogolaatay inaadan soo degin, soo degin, soo bandhigin, sameynin, gudbin, ama haddii kale u baahin macluumaad ama waxyaabaha ku jira (wadar ahaan, "Waxyaabaha") oo ku xadgudbaya wixii qof saddexaad dhinac u leeyahay, astaamaha ganacsiga, ama waxgaradka kale ee hantida ama xuquuqda lahaanshaha. Waxaad ogolaatay inaad u hogaansanto sharciyada quseeya lahaanshaha xuquuqda iyo adeegsiga hantida aqooneed, waxaadna mas'uul ka noqon doontaa kaliya masuuliyada wixii xadgudub ah ee ka dhaca shuruucda la xiriira iyo wixii ku xadgudba xuquuqda qof saddexaad oo ay keento waxkasta oo aad soo bandhigto ama aad gudbiso. Culayska cadeynta in Wax kasta oo ka mid ah uusan ku xadgudbeynin wax sharci ah ama xuquuqaha dhinac saddexaad ayaa leh adiga oo keliya adiga.
5. QIIMO KU SAABSAN SHAQADA. Waxa aad ogolaatay inaadan soo degin, soo degin, soo bandhigin, sameynin, gudbin, ama haddii kale u qaybin Waxkasta oo Goobta ku yaal oo ah (a) mid xor ah, sumcad-xumo ah, fisqado ah, sawir-xumo, aflagaado ah, ama hanjabaad ah; (b) u dooda ama dhiiri galiya ficil horseedi kara fal dambiyeed, kicin kara masuuliyad madani, ama hadii kale ku xad gudba sharciga ama sharciga ama sharciga shisheeye ee lagu dabaqi karo; ama (c) xayeysiiyaan ama haddii kale dalbado lacag ama ay ku dalbanayaan alaab ama adeegyo. Waxaan xaq u leenahay inaan joojino rasiidkaaga, gudbintaada, ama qaybinta kale ee shey kasta oo kale ah annaga oo adeegsanayna Bogga, iyo, haddii ay quseyso, inaan ka tirtirno wax kasta oo ka mid ah adeegyadeeda. Waxaan ku talo jirnaa inaan si buuxda ula shaqeynno saraakiisha fulinta sharciga ama wakaaladaha baarista wixii xadgudub ah ee ku saabsan Shuruucda Isticmaalka ama sharci kasta oo ku habboon.
6. OGAYSIIS LACAG LA'AAN. WAAN KU SAABSAN YAHAY MAGACA UGU SAMEEYAA "SIDII AYUU YAHAY" AYAAN U BAAHANNAA IN AAN LAGA HELI KARO. WAA INAAD OGAATAA khatarta wax kasta iyo dhibaato kasta ama khasaaro ka timaad ISTICMAALKA AMA UU KUGU ISTICMAALO INAAD ISTICMAALO, SITE. KU SAABSAN SHAQAALAHA MUHIIMKA AH, WAA INUU KU SAMEEYNAA DHAQANKA IYO XUQUUQ ሁሉ MA AHA IN AAN KA QAADANNO IN SITE-KA AY KU QAADANAYO SHURUUDAHAADA ama FURAN KARAA SITE UU KA QAYB QAADO AMA BILAASH.
7. XUQUUQDA SHAQADA. UJEELADAADA INAAD OGAATO SHAQAALAHA KHUDBADAHA UU UU UU SHAQAYNAYO SHARCIGA, INUU SAMEEYO KHILAAMAHA KHATARKA KHUDBADKA KHUDBADKA (KOOWAAD, LAGU SOO JOOJIN KARO, KHATAR, KHATAR, AMA KHATARTA UGU DAMBEEYAY, AMA MACLUUMAADKA DIIWAANKA ) KAGA BAADID AMA ISA XIDHIIDI KARA ISTICMAALKAAGA SITE AMA AAD KALE OO AAD AMA MACLUUMAAD KU SAARAN SITE. Xaddididdan ayaa lagu dabaqi doonaa iyada oo aan loo eegayn haddii magdhawgu ka imanayo jebinta heshiiska, jirdilka, ama aragti kale oo sharci ama qaab ficil.
8. XUQUUQAHA AAD KU SAABSAN. Waxaan la shaqeyn karnaa tiro ka mid ah la-hawlgalayaasha iyo la-hawlgalayaasha kuwaas oo shabakadoodu ku xirnaan karto Gudaha Goobta gudaheeda. Sababtoo ah awood uma lihin xakameynta iyo waxqabadka shabakadahan lammaanaha ah iyo kuwa xiriirka la leh, ma sameynno balanqaadyo ama dammaanad qaad ku saabsan saxnaanta, waxa ku jira, ama tayada macluumaadka ay bixiyeen goobaha noocaas ah, mana qaadaneyno mas'uuliyad kama-saaris ah, oo diidmo ah, aan sax ahayn, marin habaabin ah, ama waxyaabo sharci darro ah oo laga yaabo inay ku noolyihiin boggagaas. Sidoo kale, waqti ka waqti laxiriira isticmaalkaaga Bogga, waxaa suuragal ah inaad marin u hesho waxyaabo ka kooban (oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xadidneyn, websaydha) oo ay iska leeyihiin dhinacyada saddexaad. Waad qiraysaa oo ogolaatay inaanan dammaanad qaad ka qaadin, isla markaana aan masuuliyad iska saarin, saxnaanta, lacagta, waxa ku jira, ama tayada waxyaabaha ku jira dhinac saddexaad, iyo in, ilaa si cad loo bixiyo mooyaane, Shuruuda Isticmaalkaan ayaa xukumaya isticmaalkaaga wixii iyo dhammaan waxyaabaha ka kooban dhinac saddexaad.
9. ISTICMAALKA ISTICMAALKA. Waxaan ku soo rogeynaa xayiraadyo qaarkood isticmaalkaaga oggol ee goobta. Waxaa lagaa mamnuucay inaad ku xad gudubto ama isku daydo inaad ku xad gudubto astaamaha amniga ee Bogga, oo ay kujirto, iyadoon xadidnayn, (a) gelitaanka waxyaabaha ama macluumaadka aan loogu talagalin, ama gal gal server ama koonto oo aan laguu idmin inaad gasho; (b) isku dayga in la baaro, lakalaaso, ama la tijaabiyo nuglaanta goobta, ama nidaam kasta oo laxiriira ama shabakad, ama in la jabiyo amniga ama tillaabooyinka xaqiijinta iyadoon la helin oggolaansho sax ah; (c) faragalinta ama isku dayga faragalin ku sameynta adeega isticmaale kasta, martigeliyaha, ama shabakada, oo ay kujirto, iyadoon la xadidin, iyadoo loo gudbinayo fayras goobta, buux dhaafid, "daadad," "buufin," "boosteejooyin," "Shil;" (d) Adeegsiga Bogga si loogu diro iimayl aan la codsan, oo ay ku jiraan, iyadoon la xadidin, dalacsiin, ama xayeysiin loogu talagalay badeecadaha ama adeegyada; (e) been abuurka mashiin kasta TCP / IP xirmo ama qayb kasta oo ka mid ah macluumaadka cinwaan ka ah e-mayl kasta ama dhajin kasta oo la adeegsanayo Bogga; ama (f) isku dayga in wax laga beddelo, dib-u-farsamee, kala-deyn, kala furfuro, ama haddii kale la dhimo ama la isku dayo in la dhimo qaab qaab-muuqaal bini-aadam ah oo ka mid ah koodhkii isha ee aannu isticmaalnay siinta Bogga. Waxaa kaloo lagaa mamnuucay inaad nuqul ka sameysato Bogga, ha ahaato mid gacanta ah ama hab otomaatig ah, ogolaanshahayaga la'aan. Xad gudub kasta oo ku timaadda nidaamka ama amniga shabakada wuxuu kugu mutaysan karaa ciqaab madani iyo / ama dambiile.
10. INDEMNITY. Waad ogolaatay inaad noo sheegto xaqiiqooyinkaaga iyo dayacaadaada. Waxaad ogoshahay inla cadeeyo, difaaco, iyo in aan wax yeelo ah naga geysan dhamaan sheegashooyinka dhinac saddexaad, qasaarooyin, qaan gaar ah, waxyeelo, iyo / ama kharashyo (ay kujirto khidmadaha qareenka iyo qarashaadka macquulka ah) ee ka soo baxa marin u helkaaga ama isticmaalka Bogga, xadgudubkaaga Shuruudaha Adeeggan, ama ku-xadgudubkaaga, ama ku xad-gudubka isticmaale kale oo akoonkaaga ah, wixii hanti aqooneed ah ama xuquuq kasta oo qof ama hay'ad leedahay. Waxaan kugu wargalin doonaa si dhakhso leh wixii dalab ah, khasaare, mas'uuliyad, ama dalab, waxaana kuusoo bandhigi doonaa kaalmo macquul ah, kharashaadkaaga, adoo iska difaacaya sheegashada noocaas ah, luminta, qaan sheegashada, waxyeelada, ama qiimaha.
11. DHAQANKA; WAIVER. Haddii, sabab kasta ha noqotee, maxkamadda awoodda u leh u aragto in eray ama shuruudo ku xusan Shuruudahan Isticmaalka ay yihiin kuwa aan la fulin karin, dhammaan shuruudaha iyo shuruudaha kale waxay ku sii jiri doonaan si buuxda oo saameyn ah. Ka-dhaafis jebin kasta oo ku saabsan wax ka mid ah qodobbada Isticmaalkaan ma yeelan doonaan ka-dhaafitaan wixii hore, isku mid ah, ama ku-meel-gaar ah oo la mid ah ama qodobbadii kale oo halkan ku yaal, oo tanaasulidna ma dhaqan-geli doono haddii la sameeyo qoraal ahaan oo uu saxeexo oggolaansho mooyee wakiilka xisbiga ka tanaasula.
12. LACAG LA'AAN. Ma jiraan wax ku jira Bogga oo loo fahmi karo inay ku siinayaan rukhsad si aad u isticmaasho mid ka mid ah calaamadaha ganacsiga, calaamadaha adeegga, ama astaamaha aan iska leennahay ama dhinac saddexaad.
13. FADLANYADA. Waxaan xaq u leenahay inaan wax ka bedelno Shuruudahan oo aan sidaas yeelno annagoo ku dhejinna ogeysiiska barta internetka. Wax ka baddelka lagu sheegay waa inuu ansax noqdaa 30 maalmood kadib markii la geliyay Bogga. Waad diidi kartaa wax ka baddelka adigoo ka baxay liiska emailkeena.